Joiwo JWAT203 Televiziona fanoherana ny fanimbana olona dia apetraka ao amin'ny Indoniesia-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-05-22 HITS: 11
Ningbo Joiwo's vmahatohitra andal Telephone Public JWAT203 napetraka ao amin'ny tionelina, Indoniesia.Nozarain'ny mpanjifa anay ny sarin'ny fangatahan'izy ireo ary lazainy anay fa mandeha tsara io telefaona io, afa-po be ry zareo.
Fitaovana vy mihodina, miaraka amina mari-pahaizana IP54 miaro, keypad nomerika feno, bokotra miantso 4 hafainganam-pandeha izay mihetsika dia mandeha ho azy ny serivisy vonjy maika hametahana anao haingana amin'ny fanampiana. Ity telefaona ampahibemaso cvoafidy fitaovana miaraka na tsy misy jiro (jiro fanilo) eo an-tampony. Raha vantany vao tonga ny antso, dia hirehitra ny jiro hampitandrina.
izany Telephone-proof Telephone dia mety amin'ny fampiharana Railway, fampiharana an-dranomasina, Tunnels. Fitrandrahana ambanin'ny tany, mpamono afo, indostrialy, fonja, fonja, toeram-pijanonana, hopitaly, toby fiambenana, tobin'ny polisy, efitrano fanaovana banky, masinina ATM, kianja filalaovana anatiny sy ivelan'ny trano sns.
3. keypad firaka zinc miaraka amin'ny bokotra miantso 4 hafainganana.
Joiwo dia manome ny serivisy an-tariby an-tarobia indostrialy ary mitady telefaona amin'ny besinimaro ho an'ny tetikasa ve ianao?